basename uye dirname: mirairo miviri iwe yaunofanirwa kuziva | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nguva, mamwe ma tutorials anoitirwa kutsanangura mimwe mirau isinganzwisisike uye isinganzwisisike, kune rimwe divi, kune mamwe anosanganisira akapihwa serial uye haana kufarirwa se cd, ls, katsi, nezvimwewo, asi zvinongoshanda. Muchidzidzo ichi ini ndinokuratidza zvinogona kuitwa nemaviri emirairo iyi: basename ndokuudza.
Zvichida priori zvinoita kunge zvisina musoro kwauri uye kuti hazvina zvazvinobatsira, asi vanazvo chaizvo anoshanda mafomu mune dzimwe nguva, senge, semuenzaniso, muzvinyorwa pazvinofanirwa kuburitsa chimwe chikamu chegwara, senge zita refaira kana dhairekitori kuitira kuti mumwe murairo ushande pane izvi ...
1 Ndezvipi izvi
2 Mienzaniso yekushandisa
Iyi mirairo yakanyanya kukosha, uye mashandiro ayo Ndizvo:
basename: inoshandiswa kuburitsa zita refaira kubva munzira.
Ndiudze: yaishandiswa kuburitsa iro dhairekitori zita kubva munzira.
Pano unogona kuona zvimwe mienzaniso mashandisiro avo
Semuenzaniso, kushandisa basename ne / etc / passwd, uye kuti inodzosera zita refaira mune zvarinobuda, mune ino kesi passwd:
Iwe unogona zvakare kudoma kuwedzera saka kuti inokupa iyo zita rezita pasina kuwedzerwa. Semuenzaniso, ngatiti iwe unoda kuburitsa zita remufananidzo /home/media/test.jpg pasina iyo jpg yekuwedzera (yaizodzoka bvunzo):
Unogona kunyange fambisa nzira dzakawanda panguva imwe chete zvakasiyana, nekuda kweizvi iwe unofanirwa kushandisa iyo -a sarudzo:
Kuti uite zvinopesana, uye ndokupa iwe zita redhairekitori, pasina zita refaira, ipapo unofanirwa kushandisa Ndiudze. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuishandisa munzira /var/spool/mail/test.txt uye ive nekudzoka / var / spool / mail, wozoshandisa:
Kana iri a zvinoshandiswa mune script, pano une mumwe muenzaniso. Fungidzira kuti iwe une yakapusa script, uye kuti mairi mune nzira inosiyana. Asi iwe unoda kuti iratidze dhairekitori rine iyo faira, zvisinei nefaira, mune iyo kesi iwe unogona kuve nechimwe chinhu senge:
Zviripachena, mune ino script "nzira yezita" yaizogara iri imwecheteyo yakaziviswa neyakajairwa pakutanga, asi panogona kunge paine zviitiko zvisipo, uye ndipo pari zvinova zvinoshanda. Semuenzaniso:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » basename uye dirname: mirairo miviri iwe yaunofanirwa kuziva
Muenzaniso wakanaka wezvinhu izvo zvekuti paunenge uchidzidza unoona zvisina basa, asi kana wasvika pachidzidzo unoona mashandiro acho.